साउदीमा हुनेले अनिबार्य हेर्नुहोस : साउदीमा के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन? - ramechhapkhabar.com
रोजगारी, व्यापार तथा अन्य शिलशिलामा साउदी अरबमा लाखौ नेपाली पुगेका छन्! साउदीको का’नुन बारे जानकारी नहुँदा साउदीमा रहेका धेरै नेपाली मु’द्दामामि’लामा फ’स्ने गरेका छन्! नेपालको तुलनामा साउदीको कानुन निकै क’डा छ ! कानुन नबुझ्दा धरै नेपाली अ’प्ठेरोमा परिरहेको अवस्थामा आज हामीले साउदीमा गर्न हुने र गर्न नहुने काम बारे जानकारी लिएर आएका छौ! यो सामाग्री आफुले पढिसकेपछि सक्दो शेयर गरिदिनुहोला !
(यो जानकारी सकेसम्म धेरैजना समक्ष पुग्याई सहयोग गरी दिनुहुन साउदी अरबमा कृयाशील गैर आवासीय नेपाली संघ, नेपाली संघसंस्था लगायत सम्पूर्ण सबैमा अनुरोध छ) वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा आई विभिन्न पेशा/व्यवसायमा संलग्न रहेका नेपाली नागरिकहरूले गर्न हुने/नहुने कामहरु एवं सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सज’गता र सचेत’नाका सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावासले समय समयमा विभिन्न कार्यक्रम, फेसबुक एवं वेभसाइट मार्फत जानकारी गराउदै आएको छ । श्रमिक सचेतनामा मद्दत पुच्याउने उद्देश्यले विभिन्न बुंदाहरु समेटेर साउदी अरबमा गर्न हुने/नहुने कार्यहरू सम्बन्धी जानकारी विस्तृतरूपमा निम्नानुसार पुनः संप्रेषण गरिएको छ ।
साउदी अरबको सा’इबर अप’राध वि’रूद्दको कानून, २००७ को कोही/कसैले उ’ल्लङ्घन गरेमा ५ वर्षको जे’ल स’जांय वा ३० लाख रियालसम्म वा दुबै जरि’वाना हुने भएकोले सो का’नूनको प्रति’कूल हुने कुनै पनि ग’तिविधिहरू नगर्नु(नगराउनु हुन अनुरोध छ । यसकालागि कसैले पनि आफ्नो फोनबाट अना’वश्यक म्यासेज वा कुरा नगर्नुहोस । फेसबूक, इमो, Whatsapp, Messenger वा अन्य माध्यमबाट साउदी कानूनको बर्खि’लाप हुने गरी कुनै कुरा अपलोड, शेयर, लाइक, कमेण्ट आदि नगर्नुहोस ।
आफ्नो फोनबाट अरूलाई कुरा गर्न नदिनुहोस । आफैंले पनि आफ्नो फोनबाट साउदीमा अप’रिचित पुरुष वा महिलालाई सम्पर्क गरेर अना’वश्यक कुरा नगर्नुहोस ।
हु’ण्डी, ह’वाला वा अन्य कुनै पनि गै’र-कानूनी माध्यमबाट रकमको कारोवार नग’र्नुहोस । स्वदेशमा रकम पठाउँदा बैंकिङ माध्यमबाट मात्र पठाउनुहोस ।
आफू रहेको मुलुकको धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज र राजनीतिक व्यवस्थाको सम्मान गर्नु तपाई हाम्रो दायित्व हो । साउदी अरबमा रहदा आफ्नो यो दायित्व पूरा गर्नुहोस्‌ । आफ्ना धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप आफ्नो कोठाभित्र मात्र सीमित राख्नुहोस्‌ । साउदी अरबमा मदि’राजन्य पदार्थको उत्पादन, वेचविखन, ओसा’रपसार, सेवन तथा ला’गूपदार्थको सेव’न वा कारोवार पूर्ण गैर’कानूनी कार्य हो । यस्ता काममा संलग्न नहुनुहोस ।
अरूको उक्सा’हटमा लागेर वा स्वयं पनि कम्पनीको काममा वा’धा पुच्याउने, उत्ते’जना फैला’उने वा द्वे’ष बढाउने कार्य, ब’न्द, हड’ताल, ध’र्ना, जु’लुस तथा राजनैतिक सभा, सम्मेलन, गो’ष्ठी गर्नु पूर्ण गैर’कानूनी हुनुका साथै ठूलो स’जाय समेत हुने भएकाले यी कुनैपनि कार्यहरू नगर्नुहोस्‌ । छुट्टीमा वा रोजगार करार सम्झौता समाप्त गरी नेपाल जाँदा अथवा नेपालबाट फर्केर आउँदा नेपाल एवं साउदी अरबको कानूनले नि’षेध गरेका कुनै पनि (आफ्नो वा अन्य कुनै व्यक्तिको) मा’लसामान वा सून लगायत बहु’मूल्य धातु लैजाने वा ल्याउने नगर्नुहोस । कुनै अन्य व्यक्तिका कानूनतः वर्जि’त मालसामान तपाईले बोक्नुभएको छ भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार तपाई आफैं हुनुहुनेछ । कानूनले प्रति’बन्ध लगाएका सामान ल्याउने/लैजाने गरेका कारण धेरै नेपालीहरु सम्बन्धित निकायको कार्य’वाहीमा परेका छन्‌ । तसर्थ, त्यस्ता कार्यमा संलग्न नहुनुहोस ।
स्थानीय कानून, ट्राफिक नियम र अनुशासनको पालना गर्नुहोस्‌ र कानूनी कार’वाही हुनबाट बच्नुहोस्‌ । ट्राफिक नियमको उ’ल्लंघन गरी बाटो का’ट्दा धेरै नेपालीको नि’धन हुनुका साथै गम्भी’र घा’इते हुने गरेका छन्‌ । तसर्थ, बाटो का’ट्दा तोकिएको स्थान वा संकेतभएको ठाउँबाट मात्र का’ट्ने गर्नुहोस्‌ । ट्राफिक नियमको उल्ल’घन गरी बाटो का’ट्दा दुर्घ’टनामा परी नि’धन भएकाहरुको परिवारले क्ष’तिपूर्ति समेत पाउदैनन्‌ ।
गर्मी तथा सुख्खा हावापानी भएकोले प्रशस्त पानी पिउनुहोस । कोठा बाहिर र कोठाभित्रको तापक्रम सन्तुलन हुने गरी AC चलाउनुहोस । दिनभरी घाममा काम गरेर कोठामा छिर्ने वित्तिकै एकै चोटी धेरै चिसो हुनेगरी AC चलाउने तथा धेरै चिसो पानी वा चिसो पेय पदार्थ उपयोग गर्ने नगर्नुहोस । पारिश्रमिक बढी पाउने लोभमा रोजगार करार सम्झौताभन्दा फरक काम र कम्पनी नखोज्नुहोस । विधिवत कफला हस्तान्तरण नभएसम्म कम्पनी छो’डेर भा’ग्ने वा काम छो’ड्ने नगर्नुहोस । कम्पनी छो’डेर भा’गेको अवस्थामा अ’वैध हुन गई स्वदेश फर्कन तथा विरा’मी भए उपचार गर्न स’मस्या पर्छ । साथै, अ’वैधरुपमा काम गरिरहेको अवस्थामै कार्य दुर्घ’टनामा परी मृ’त्यु भएमा परिवारले सामाजिक सुरक्षा बिमा वापत कुनै रकम पाउँदैन्‌ ।
रोजगार करार अवधि सकिने मिति यकिन गर्नुहोस । करार अवधिभन्दा बढी बस्न कानूनतः मिल्दैन । करार अवधि सकिनु अघि नैं एक्जिट भिषा लगाउने वा करार सम्झौता नवीकरण गर्ने यकिन गर्नुहोस्‌ । सो अनुसार कम्पनीमा लिखित आवेदन दिनुहोस । करार सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने भए पुनः श्रमस्वीकृति लिने व्यवस्था गर्नुहोस । एउटा कम्पनीसंगको करार समाप्त भई अर्को कम्पनीसंग करार गर्ने भएमा साउदी सरकारले उपलव्ध गराएका Absher App तथा QIWA पोर्टल प्रयोग गर्नुहोस्‌ ।
आफ्नो Iquama (फोटोकपि समेत) अरूलाई नदिनुहोस । तपाइँको अकमाको पूर्ण जिम्मेवारी तपाइँमा हुन्छ । तपाइँको अकमा प्रयोग गरी कसैले बद’मासी गर्यो भने त्यसको दोष तपाइँमा आउदछ र तपाइ सजायको भागी हुनुहुन्छ । माथि भने झैं आफ्नो टेलिफोन पनि अरूलाई नदिनुहोस । त्यसरी दिएर गल’त कल गरेमा कानून अनुसार तपाईं पनि कार’वाहीमा पर्नुहुनेछ ।
कम्पनीमा आफुले गर्नुपर्ने दैनिक कामको तालिका Worksheet प्राप्त गर्नुहोस । यसबाट तपाईको अधिकार स्थापित गर्न सहज हुनेछ ।
आफुसंगै काम गर्ने अरू देशका कामदारसंग सभ्य व्यवहार गर्नुहोस, झग’डा नगर्नुहोस । आफ्नो म्यानेजर वा सुपरभाइजरसंग सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोस । स्वयं एवं विदेशी कामदारको ल’हैलहैमा लागेर धेरै नेपालीहरुले समान चो’री गरेका आ’रोपका मु’द्दाहरु वर्षौं देखि विभिन्न अदालतहरुमा रहेका छन्‌ । तसर्थ, चो’री जस्तो ज’घन्य अप’राध नग’र्नुहोस्‌ ।
वि’रामी भएमा समयमा नैं अस्पताल जानुहोस्‌ र यसमा कम्पनीको सहयोग आवश्यक पर्नेमा आधिकारिक व्यक्तिलाई भन्नुहोस । काम गर्दा कामको प्रकृति अनुसार व्यवसायजन्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुहोस र सुरक्षाका सामाग्री प्रयोग गर्नुहोस ।
विभिन्न कानूनी झण्झ’ट तथा मु’द्दा मामि’लामा परेका कामदारले राजदूतावास वा सम्बन्धित कम्पनी वा निकायमा समयमैं जानकारी गराउनुहोस । सम्बन्धित प्रहरी वा अदालतमा गई मु’द्दाको अद्या’वधिक अवस्था बुझ्नुहोस । अदालतमा भाषा अनुवादक हुन्छन्‌ । उनीहरूको सेवा लिई आफ्नो पक्षका सवाललाई प्रभावकारी रूपमा अदालतसमक्ष राख्नुहोस । मु’द्दाको प्रतिरक्षा र सुरक्षामा आफु सदैव सचेत रहनुहोस । ग’म्भीर प्रकृतिको मु’द्दामा अदालतमा हुने सुनवाइमा नेपाली राजदूतावासको आवश्यकता परेमा समयमै आफ्नो सुनवाइको मिति राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुहोस्‌।
सवारी चालकको रूपमा साउदी अरब आएका कामदारहरूले सवारी चालक अनुमति पत्र बेगर सवारी चलाएर दु’र्घटना भई धेरै नेपालीहरुको नि’धन भएको छ । सवारी चालक कामदारले कम्तीमा सवारी साधनको तेस्रो पक्ष वीमाको कागजात, सवारी चालक अनुमती पत्र तथा नभई नहुने अन्य कागजात छैनन्‌ भने सवारी साधन नचलाउनुहोस । सवारी साधन चलाउन वा’ध्य पार्ने अवस्था भएमा सो कम्पनीको विवरण सहित राजदूतावासमा सूचना दिनुहोस्‌ र राजदूतावासको सुझाव अनुसार गर्नुहोस्‌ ।
आफूले नचिनेको व्यक्तिलाई आफ्नो सवारी साधनमा नचढाउनुहोस । कुनै गैर’कानूनी काम गरी भा’गेको मानिसले समेत तपाइको सवारीमा लिफ्ट मागेको हुनसक्दछ । तसर्थ, चना’खो हुनुहोस्‌ ।
मु’द्दा/मा’मिला भई नेपाल फर्केका कामदारले पुनः साउदी अरब आउनु परेमा पुरानो ईकामामा कुनै मु’द्दा बांकी भए/नभएको यकिन गरेर मात्र आउनुहोस्‌ । अन्यथा तपाइ विमानस्थलमै प’क्राउ पर्न सक्नुहुनेछ । कुनै पनि कागजातहरुमा सही गर्नुभन्दा अगाडि के कागजात हो भन्ने प्रष्ट हुनुहोला । कतिपय कम्पनीहरुले कामदारहरुले पैसा सापट लिएको । रोजगारी नवीकरण गर्न मन्जुर गरेको वा कम्पनीबाट पाउने फाइदाहरु लिइसकेको लगायतका कागजातमा सही गराउने गरेको पाइएको छ । कम्पनीको प्रतिनिधि वा साथी कसैले कुनै कागजातमा सहि/छाप लिन प्रलो’भन देखाएको भरमा वा केही फरक पर्दैन भनेको आधारमा कागजातहरुमा सही नगर्नुहोस । कुनै पनि कागजातमा भएको सहीलाई अदालतले ब’लीयो प्रमाणका रुपमा लिने गरेका छन्‌ । पछि, मलाई थाहा थिएन आदि भनेर कुनै अर्थ नरहने तर्फ सचेत हुनुहोस्‌ ।
पुनश्चः साउदी सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा तथा कामदारको हित एवम्‌ सुविधाको लागि ल्याएका कार्यक्रमहरूबाट लाभ लिनको लागि Absher App को प्रयोग गर्नैपर्ने हुँदा उक्त मोवाइल एप्लिकेशन चलाउने तरिका सिक्नुहोस्‌ । माथिका बुंदाहरु राग्रोसंग र पटक पटक बढी आफूलाई सजग र सचेत राख्नु हुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ ।